स्क्रिन स्क्र्यापर के हो? Semalt बाट जवाफ
स्क्रीन स्क्र्यापर के हो? यो एक सेवा हो जसले इन्टरनेटबाट डाटालाई स्क्र्याप गर्दछ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार यो ढाँचा गर्दछ। एक स्क्रिन स्क्र्यापर प्रयोगकर्ता इनपुट पुन: ढाँचा गर्न सक्षम छ र ध्यानपूर्वक अनुरोधहरू ह्याण्डल गर्दछ। यसका साथै दुबै दृश्य र गैर-दृश्य UI वस्तुहरू लक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
तपाईंको उद्योग वा कम्पनीको लागि स्क्रिन स्क्र्यापिंगका लाभहरू:
कुनै पनि उद्योग वा कम्पनी जसले डेटा संकलन गर्न र ट्रान्सफोर्म गर्न आवश्यक पर्दछ स्क्रिन स्क्रैपरबाट फाइदा लिन सक्दछ। स्क्रिन स्क्र्यापरको सबैभन्दा विशिष्ट सुविधाहरूमध्ये यो एक हो कि यसले असंगठित र असभ्य डाटालाई संरचना, पढ्नयोग्य र स्केलेबल फारममा रूपान्तरण गर्दछ। यसका साथै उपकरणले व्यवसायिकहरूलाई दुबै छोटो पुच्छर र लामो पुच्छल कुञ्जी शब्दहरूलाई लक्षित गर्न दिन्छ, र उनीहरूलाई वर्णन वा प्रतिस्पर्धी साइटहरूको सामग्री स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, डाक्टरहरु एक राम्रो तरीका बाट स्वास्थ्य लेख को लागी एक स्क्रिन स्क्रैपर प्रयोग गर्न सक्दछ। स्वास्थ्य उद्योगसँग सम्बन्धित धेरै जानकारीहरू छन्, र डाक्टरहरूले उनीहरूको आवश्यकता अनुसार यो डेटा एकत्र गर्न सक्दछन्।
स्क्रीन स्क्र्यापर के हो? तपाईं सही स्क्रिन स्क्रेपर कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ? यहाँ हामीले दुई आश्चर्यजनक स्क्रीन वा वेब स्क्रेपरको बारेमा छलफल गरेका छौं जुन तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउन सक्दछन्।
UiPath स्क्रिन स्क्र्यापिंग अग्रगामी गरीएको छ र इन्टरनेट मा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा प्रसिद्ध उपकरण मध्ये एक हो। यस अनुप्रयोगको सब भन्दा प्रख्यात सुविधाहरू मध्ये एक यो १ 16 मिलिसेकेन्ड अन्तर्गत र १००% शुद्धतामा डाटा स्क्र्याप गर्न सक्दछ। UiPath अघि, स्क्रिन स्क्र्यापिंगमा सटीकताको कम दर थियो र प्रदर्शनमा कमजोर, गलत र ढिलो OCR को पर्यायवाची थियो। धन्यबाद, यस उपकरण को लागी बिभिन्न वेब पृष्ठहरु बाट जानकारी निकाल्न को लागी एक अभिनव मेशिन शिक्षा टेक्नोलोजी फिचर छ। UiPath सबै अपरेटिंग प्रणालीहरू र वेब ब्राउजरहरूको साथ उपयुक्त छ र तपाईंलाई ठूलो सावधानीका साथ डाटा स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यस उपकरणलाई सजिलै गतिशील वेब पृष्ठहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ र एक पटकमा धेरै स्क्रिन स्क्र्यापिंग कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यस सेवाले तपाईंलाई विशेष पृष्ठको सटीक पाठ मानहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार यसलाई स्क्र्याप गर्दछ। तपाईंले भर्खरै वेब सामग्री हाईलाइट गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ र यूआईपाथलाई यसको कार्य गर्नको लागि अनुमति दिनुहोस्।
UiPath जस्तै, Mozenda एक अन्तरक्रियात्मक र अद्भुत स्क्रीन स्क्रैपर हो जुन सयौं वेब एजेन्टहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ र डाटालाई आरामसँग प्रक्रिया गर्न सक्छ। Mozenda दुबै पेशेवर र गैर-पेशेवरहरूको लागि प्राथमिक छनोट हो, र विभिन्न ग्राहकहरू समयमै र सही डेलिभर गरिएको महत्वपूर्ण डाटा इनपुटको लागि यो सेवामा निर्भर छन्। चाहे तपाईं डाटा वैज्ञानिक हो वा विद्यार्थी, Mozenda तपाईंको लागि सही विकल्प हो। यो अन्तर्क्रियात्मक उपकरणको साथ, तपाईं सजिलैसँग डाटा भण्डारहरूको ठूलो संख्या सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र एक पटकमा बहु वेब पृष्ठहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। Scraped डाटा Google ड्राइभ, Box.net वा Dropbox मा बचत गर्न सकिन्छ। यो स्क्रिन स्क्र्यापिंग उपकरण स्वचालित रूपमा सबै भन्दा राम्रो र उपयुक्त स्क्र्यापिंग पद्धति छनौट गर्दछ र तपाईंको आवश्यकताहरू अनुसार तपाईंको कार्यहरू पूरा गर्दछ। मोजेंडाले तपाईंलाई UI वस्तुमा देखिने टेक्स्ट स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ र वेब कागजातहरू क्याप्चर गर्दछ, तिनीहरूलाई पठनीय र स्केलेबल ढाँचामा रूपान्तरण गरेर।